COVID-19 Kunyange ichityisa, nguva dzematambudziko pamusoro pemakore dzakasimudzirawo zvimwe zvezvakavanzika zviyeuchidzo zvichiri kushandiswa nhasi. Kubva ku ambulensi yakagadzirwa mukati meMiddle Ages kubatsira varapi kusvika uye kutakura varwere nekukurumidza, kutora tepi panguva yeWWII kubatsira varwi kugadzirisa ...
Kufanana nemamwe akawanda emabhizimusi emabhizimusi, China Mold Manufacturers Association yakaunzawo zvirongwa zvine chinangwa chekukwezva vechidiki. Nhasi, kutora chizvarwa chinotevera chevashandi chave chinhu chakanyanya kukoshesa vagadziri veChinese. Ndinoziva izvi zvinonzwika ...
Liquid silica gel yakapfupikiswa seLSR, chinova chigadzirwa chinogona kufarirwa nevatengi nevagadziri. Liquid silica gel inogadzirwa nesilica gel zvigadzirwa. Iyo ine kusimba kwakanaka, isina mvura uye hunyoro kuramba, uye inopesana neacid, alkali uye nezvimwe zvinhu zvemakemikari. Kazhinji u ...
Kudzidza epurasitiki jekiseni Kuumbwa kwacho kunogona kutetesa zvishoma pakutanga. Kambani yako yanga ichipfuura nemavhiki, mwedzi kana pamwe kunyangwe makore ekutsvagisa nekusimudzira kugadzira chinyowani chitsva, chinogadzira uye chakabudirira chigadzirwa. Iwe unotanga kuchera zvakadzika uye kuronga kuti chigadzirwa chako sei ...
Uri Kusarudza Iyo Yakakodzera Chinyorwa Kune ako Mapurasitiki Zvikamu?
Kusarudza izvo zvakakodzera zvemhando ipi neipi yechigadzirwa kwakakosha kuwedzera kushanda uye purofiti yechigadzirwa. Usango tarisa kuti chii chinopera basa chako chigadzirwa. Ita shuwa kuti iwe unoziva iyo ins nekubuda kwekuti chinhu icho chinoshandiswa sei uye icho chichauya mukubatana nevhu ...